कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा सँगसँगै अभियानसँग सहकार्य
हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर । विश्वव्यापी महामारीको समय । अस्पतालहरू बिरामीले खचाखच भरिएको बेला । अधिकांश अस्पतालहरू कोभिडका बिरामीको उपचार स्थलमा परिणत । ननकोभिड अस्पताल पाउनै मुस्किल । पाइहाले पनि उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुग्नै धौधौ । कोभिड अस्पतालमा पनि सङ्क्रमित बिरामीहरूको सङ्ख्या अत्यधिक हुँदा शय्या र अक्सिजन तथा उपकरण प्रयोगमै असहजता । अग्रपङ्क्तिमा खटिएका थुप्रै स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वयं सङ्क्रमित । सामान्य प्रकृतिका बिरामीहरूले त घरमै बसी स्वास्थ्य लाभ लिनु सिवाय अरू विकल्प नै रहेन । समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्र नै अस्तव्यस्त, जनजीवन नराम्ररी प्रभावित । झट्ट हेर्दा कोभिड १९ को नयाँ भेरिअन्ट भित्रिएपछि सुदूरपश्चिममा देखिएको परिदृश्य यही नै हो ।
यस्तो प्रतिकुल समयमा कोभिड सङ्क्रमित बिरामी भनौँ या अन्य रोगका बिरामी, सबैलाई सहारा चाहिन्छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी त त्यो समयमा भगवान् सरह हुन्छन् । झण्डै आधा जति रोग त स्वास्थ्य परामर्श पाए मात्रै पनि निको भएको महसुस हुन्छ बिरामीलाई । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै कैलालीको धनगढीमा रहेको कैलाली अस्पतालका फिजियोथेरापी विभाग प्रमुख डा. सुरेन्द्र ऐरको नेतृत्वमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञ डाक्टरहरूको टिमले सुदूरपश्चिमभर कोभिड र अन्य रोगका बिरामीहरूलाई परामर्श दिँदै आएको छ । सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चालित अभियानहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेशभर सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले बिरामीहरूलाई टेलिफोन मार्फत निःशुल्क परामर्श दिइरहनु भएको छ ।
डा.सुरेन्द्र ऐरको नेतृत्वमा १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले अहिले परामर्शदाताको रूपमा सेवा दिइरहनु भएको छ । कोभिडबाट सङ्क्रमित हुनुभएका, सङ्क्रमण मुक्त हुनु भएका, अन्य रोग तथा स्वास्थ्य समस्या भोगिरहनु भएका व्यक्तिहरूले निर्धारित समयमा सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकलाई टेलिफोन गरी परामर्श लिन सकिने बताइएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकहरू साबिक भन्दा अहिलेको समयमा बढी व्यस्त हुन्छन्, बिरामीको चाप बढी हुन्छ । तर पनि आफ्नो क्षेत्रका लागि थोरै समय व्यवस्थापन गरेर भए पनि निःशुल्क परामर्श दिई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न टिमले यो नयाँ अभ्यास गरिरहेको डा. सुरेन्द्र ऐरले बताउनु भएको छ । जसका लागि कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा सँगसँगै अभियानसँग सहकार्य गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, अन्य जिल्लाहरूमा समेत विभिन्न अभियानमा जोडिएर परामर्श सेवा दिइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २०, २०७८, २३:२९:००